Su'aalaha Ku Haboon Inuu Madaxweyne Biixi Ka Jawaabo Marka Uu Dalka Yimaado - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Su’aalaha Ku Haboon Inuu Madaxweyne Biixi Ka Jawaabo Marka Uu Dalka Yimaado
1 : Mudane Madaxweyne Qodabadii aad ku xidhay sucuudiga markii aad dhoofaysay ka hor ma lagaa aqbalayaa?
2 : Mudane Madaxweyne diyaaradii aad ku dhooftay ma dawalada sucuudigaa ku soo dirtay, mise waad soo kiraysatay ?
3: mudane madaxweyne markii aad dhamaysatay wajibaadka xajjaka sucuudiga ma kala hadashay danaha dalka aad madaxda utahay ee Somaliland ?
4: mudane Madaxweyne Sharciga Somaliland intee n leeg ayaad ku xad gudbtay markii aad la kulantay masuuliyiin ka socoda dawaladda Federaalka ah ee Soomaliya?
5 maxaad ka wada hadasheen masuuliyiintii Soomaaliya ee aad la kulanteen?
6: mudane madaxweyne wasiirka maaliyada somaliya muadane Abdirahman Duale Beyle oo ka mid ah masuuliyiintii aad wada kulanteen waxa uu sheeegay inay umadda somaliyeed u oomanyihiin dib uheshiisiin dhab ah hadalkaasi sidee buu kuu saameeyay adiga?
7: mudane madaxweyne guddomiyaha xisbiga waddani cabdiraxmaan ciro iyo masuuliyiinta sarsare ee xisbiga waddani adiga iyo xukuumadaadu waxaad ku eedaysaan inay xidhiidh la leeyhiin masuuliyiinta xamar adigu kulankan aad layeelatay wasiiradda maxaad kaga jawaabaysaa?
8: odoyaashii dhex-dhexaadinta idinka dhex waday xukuumadaada iyo kornayl caarre waxay sheegeen inay adiga kula sugayaan makaa ma kaa go’antahy inaad degdeg u bilowdo arrinkaas?
:- sida ugu haboon ee madxweynuhu uga jawaabi karo su’aalahan waa isagooo aan la hadlin warbaahinta oo soo dira Afhayeenka Madxatooyadda